Ronaldinho oo sheegay shaqsiga uu Bollywood ka taageero! - iftineducation.com
iftineducation.com – Laacibka reer Brazil ee Ronalinho ayaa booqasho ku tegay dalka India, isagoo ka sheekeeyay Bollywoodka iyo inuu jecelyahay India. Dinho waxaa la su,aalay xiddiga uu ka taageero Bollywoodka?.
Waxa uuna ku jawaabay runtii aadbey u adagtay inaan magacyadooda ku dhawaaqo balse jilaaga kow ii ah waa Salman Khan, waxaana ka helay casumaad si aan uga qeyb galo dabaal dega dhalashadiisa waan ka xumaday iima suuro geleyso.
Sidoo kale Ronaldiho ayaa u tegay sida la sheegay India inuu qeyb ka noqdo filim Hindi ah, waxa uuna tilmaamay inay tahay riyo run u noqotay inuu shaashada filimada kasoo muuqdo.
Hoo Hana i Sheegin Aboowe – Dhacdooyinka bulshada